BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Maxaa laga baran karaa Somaliland iyo Puntland
Maxaa laga baran karaa Somaliland iyo Puntland
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Agoosto, 2012, 09:45 GMT 12:45 SGA
Waxa uu ku saabsan yahay waxa laga baran karo doorashooyinka Somaliland iyo Puntland.
Tan iyo intii la aasaasay maamulka Puntland 1998 bishii Augst saddex doorasho madaweyne oo uu baarlamaanka puntland doortay madaxweynaha Puntntland.
Laakiin waxaa hadda bilaabmay ololaha doorashooyinka 2014 dhici doona oo ah dooerashadii ugu horaysay ee ay dadka toos u doortaan xildhibaaanada baarlamaanka iyo madaxweyne.
Dhinaca kale Somaliland si dimoqraadiyad ah ayaa ay dowlad u samaysatay.
Doorashooyinka deegaanka, baarlamaan iyo madaxweynenimada ayaa laba jeer la qabtay Somaliland.
Doorashadii ugu horaysay ee somaliland ka dhacda ee dadku toos u soo doortaan goloyaasha deegaanka waxay dhacday December 2002, 2003diina waxaa dhacday doorashadii baarlamaanka oo dadka ay toos u doorteen.
2005 iyo 2010kii waxaa dhacday dooashoonkii madaxweynaha oo ay dadka toos u doorteen.